Saint Lucia eases on-island protocols for fully COVID-19 vaccinated travelers | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Saint Lucia na-ebelata usoro ọgwụgwọ agwaetiti maka ndị njem COVID-19 zuru oke
Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke ugbu a nwere ike ịgba akwụkwọ ụgbọ ala mgbazinye, rie nri n'ụlọ nri ndị ọzọ dị na mpaghara, ma sonye na mmemme ndị ọzọ dị ka ịtụ egwu osimiri, mgbe ha na-eleba anya n'usoro iwu dị ugbu a.
Ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke nwere ike ịnwekwu ohere ịnweta agwaetiti ahụ dum
Vaccinated ọbịa ugbu a nwere abawanye n'akụkụ niile Saint Lucia site ụbọchị mbata
Agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi, emebeghị mgbanwe ọ bụla maka usoro mbata ọbịbịa maka ndị njem
Gọọmentị nke Saint Lucia ekwuputala na Mee 31, 2021 dị irè, ndị njem ọgwụ mgbochi COVID-19 zuru oke nwere ike ịnwekwu ohere ịnweta agwaetiti ahụ dum.
Vaccinated ọbịa ugbu a nwere abawanye n'akụkụ niile Saint Lucia ewepụla ụbọchị mbata na enweghị mgbochi na kwarantaini maka ndị amaala na-alọta. Dịka ọmụmaatụ, ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike ịchọpụta ụlọ ahịa, ahịa, ụlọ nri na ihe omume na agwaetiti niile na mpaghara ndị ama ama gụnyere Castries, Rodney Bay, Soufrière na ndị ọzọ.
Ndị ọbịa niile na Saint Lucia nwere ike ịnọ n'ọtụtụ ebe obibi COVID (ụlọ nkwari akụ, obodo, Airbnb). Maka ndị ọbịa na-agba ọgwụ mgbochi, ha nwere ike ịnọ karịa ihe abụọ ma ọ bụrụ na ọ masịrị ha.
"Maka ndị nleta na ndị bi n'ógbè anyị, ntinye anyị iji soro COVID na-ebi ndụ n'enweghị nsogbu na n'ụzọ kwesịrị ekwesị," ka Hon. Mịnịsta Ala Allen Chastanet. “Ọ bụ ezie na ndị ọbịa niile na-aga Saint Lucia ugbu a nwere ike ịnwe ọmarịcha ezumike yana njem nlegharị anya na ebe nkiri dị mma, a na-akpọ ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke ugbu a ka ha nyochaa ebe niile ha na-aga ezumike, ka ha na-agbaso usoro iwu anyị. Anyị enweela ihe ịga nke ọma ma jikwaa njem nlegharị anya kemgbe anyị mepere ókèala anyị na June 2020, na-enweghị mkpa imechi n'ihi usoro iwu anyị na afụ anyị mepụtara maka ndị ọbịa na ndị ọrụ njem njem na mbụ. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike ịgbasa ohere maka ndị ọbịa na-egbochi ọgwụ mgbochi ma mee ka mmachi dị na ndị mbịambịa lọta. Ndị ọbịa a na-anabata ọgwụ mgbochi nwere ike ịga ezumike n'ezie dị ka ndị obodo. ”
Iji ruo eruo dị ka ọgwụ mgbochi zuru oke, ndị njem ga-enwerịrị ọgwụ ikpeazụ nke ọgwụ abụọ COVID-19 ma ọ bụ ọgwụ mgbochi otu ọ dịkarịa ala izu abụọ (ụbọchị 14) tupu njem. Ndị njem ga-egosi na ha na-enye ọgwụ mgbochi zuru oke mgbe ha dejupụtara akwụkwọ ikike ikike ị ga-eji abịa, ma bulite ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi. Ndị ọbịa ga-eji kaadị ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ dọkụmentị ha ga njem. Mgbe ha rutere na Saint Lucia, a ga-ebu ụzọ debanye ndị ọbịa na-edebanye aha ha n'akwụkwọ kpamkpam site na akara nyocha Ahụike raara onwe ha nye, a ga-enyekwa ha akara mkpịsị aka na-abụghị kọmputa maka oge ha nọrọ. A ga-eyiri eriri eriri a n'oge niile ịnọ ma wepụ ya mgbe ị na-apụ Saint Lucia.
A ga-ahapụrịrị ndị njem na-enweghị ọgwụ mgbochi ka ha nọrọ ihe ruru ụlọ abụọ enyere maka ụbọchị iri na anọ nke mbụ yana ndị mba ọzọ na-alọghị alọta ga-etinye akwụkwọ maka kwarantaini maka otu oge ahụ.
N'agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi, ọ dịghị mgbanwe ọ bụla emere na usoro iwu tupu ịbịarute ndị njem, gụnyere: ndị niile bịarutere Saint Lucia (afọ ise ma ọ bụ karịa) ga-enwetara nsonaazụ nyocha COVID-19 PCR na-adịghị mma karịa ụbọchị ise (5). tupu ịbata; nyefee akwụkwọ ndebanye aha na ntanetị; ma rube isi na usoro iwu nchekwa niile, gụnyere itinye mkpuchi ihu ọha.